Fanadihadian’ny FES: tsy hita hatramin’izao ny fivoaran’ny fambolena | NewsMada
Fanadihadian’ny FES: tsy hita hatramin’izao ny fivoaran’ny fambolena
Efa tany amin’ny 2014 ny nanaovana fivoriana iraisam-pirenena mahakasika ny hoavin’ny fambolena eto Madagasikara, fivoriana niainga avy amin’ny fanadihadiana nataon’ny Friedrich Ebert Stiftung (FES) sy ny Sekoly ambony momba ny fambolena, oniversiten’Antananarivo. Aiza ho aiza isika ankehitriny amin’io lalam-pihariana io ?
Nambaran’ny Vondrona afrikanina fa taona ho an’ny Fambolena ny 2014. Noresen-dahatra manokana ny mpitondra taty Afrika, toy ny teto Madagasikara, hanao laharam-pahamehana ny fambolena, izay mampiasa olona be indrindra. Na teo aza ny torolalana samihafa, tsy hita ny fivoaran’io lalam-pihariana io hatramin’izao eto amin’ny Nosy. Fantatra anefa fa manana ny ampy azo trandrahina ny eto an-toerana raha eo amin’ny sehatry ny fambolena.
Mbola nampahatsiahivina, ny herinandro lasa teo, tamin’ny tombana momba ny indostria eto Madagasikara, fa tsy maintsy ilaina ny fanjakana manome vahana ny fambolena miaraka amin’ny fiompiana sy ny jono. Nambaran’ireo nanao fanadihadiana fa teo aloha, ny antony politika nampisarahana ny minisiteran’ny Fambolena, ny Fiompiana, sy ny Jono fa tsy tena antony teknika. Mitaky fandraisana anjaran’ny fanjakana matanjaka io sehatra io satria tsy maharesy lahatra loatra ny tsy miankina, na lazaina matetika aza ny fandraharahana amin’ny fambolena. Porofon’izany ny fanafarana vary sy ny maro hafa avy any ivelany.
Tsy misongadina amin’ny tetibolam-panjakana
Sakana iray lehibe navoitra koa ny olana eo amin’ny fananan-tany, tsy misy fiarovana ny tantsaha madinika. Manampy izany ireo olana samihafa: tsy fisian-dalana, tohodrano, angovo, trano fitahirizam-bokatra, tsy fahitana masomboly, tsy fandriampahalemana… Tsy misongadina amin’ny tetibolam-panjakana hatramin’izay ireo rehetra ireo. Zatra miandry mpamatsy vola avy any ivelany ny fanjakana. Nambaran’ireo vahiny nanao fanadihadiana anefa fa miankina betsaka amin’ny fampandrosoana ny fambolena ny ady amin’ny fahantrana eto Madagasikara.
Hatramin’izao aloha, tsy hita taratra ny tena politika fampandrosoana maharitra ny fambolena. Na atao hoe jeren’ny fanjakana aza ny momba izany, tsy tokony hitazam-potsiny ny sehatra tsy miankina. Mbola fanamby lehibe, raha hatao, ny ady amin’ny fanamaivanan ny fambolena, indrindra fa lazaina mandrakariva fa 80 % ny monina any amin’ny tontolo ambanivohitra.